Wararka - Waa maxay dhab ahaan xannibaadda?
Bishii Oktoobar 31, 2008, Aqoonsi uu saxiixay Satoshi Nakamoto ayaa ku xaliyay dhibaatadan warqad ka kooban 9 bog oo ku saabsan sida lacagta laygu siinayo shabakad gebi ahaanba qarsoon oo baahsan.
Hadda waxaan ognahay in ninka dahsoon ee loo yaqaan Satoshi Nakamoto iyo sagaalkaas bog ay ku abuureen hawo khafiif ah oo u dhiganta 100 billion RMB ee bitcoin iyo tikniyoolajiyadda awoodsiisa, xannibaadda.
Iyadoo aan la helin dhinac saddexaad oo la isku halleyn karo, dhibaatada ugu weyni waxay tahay in midkeenna aan is aamini karin, sidaa darteed adduunyada xannibaadda, wareejinta waa in la baahiyaa si qof walba u ogaado taariikhda mid kasta iyo doolar kasta oo qof kasta oo shabakad Dadku waxay xaqiijin doonaan inay tani runti tahay wixii aan ku iri saxeex elektaroonig ah, ka dibna wareejinta ku ridi karto buug. Buug-gacmeedkani waa xayndaabka. Isku-xidhka baloogyada si wadajir ah waa xannibaadda Waxay diiwaangelineysaa dhammaan macaamilkii Bitcoin tan iyo markii la aasaasay ilaa maanta, haddana waxaa jira qiyaastii 600,000 oo baloog, oo leh laba ama saddex kun oo macaamil ah oo lagu duubay baloog kasta, iyo koonto kasta, oo ay ku jiraan taada iyo tayduba, waxay si dhab ah u xusuusataa inta lacag ee ay leedahay, waxay ka timid, meeshii lagu kharash gareeyay, waana daah furnaan iyo furfurnaan.
Shabakada xannibaadda, qof walbaa wuxuu hayaa isku-duwaha la cusboonaysiiyay iyo waqtiga-dhabta ah. Layaab ma leh, isku halaynta buuga waa aasaaska lacagta dhijitaalka ah, oo haddii buugga uu ka soo baxo nidaamkiisii, lacagna si fiican ugama shaqeyn doonto.
Laakiin tani waxay kicineysaa laba su'aalood oo cusub: yaa buugaagta u haya qof walba? Sideed ku hubinaysaa inaan buugaagta laga been abuurin?
Haddii qof kastaa hayn karo buug, macaamillada iyo isku xigxiga macaamillada ku jira baloog kastaa way ka duwanaan karaan, oo haddii ay jiraan gallo been ah oo kas ah, way ka sii xumaan lahayd. Suuragal ma ahan in la helo buug ay dadka oo dhami raali ka yihiin.
Markaa qofka xafidaya buugaagta waa inuu ka helaa qof walba inuu aqbalo si qof walba buugaagtiis isugu mid noqdaan. Tan waxaa sidoo kale loo yaqaanaa habka la isku raacsan yahay.
Maanta waxaa jira noocyo kala duwan oo farsamooyin isku raacsan oo kaladuwan, iyo xalka Satoshi waa in dhibaatada la sameeyo. Qofka jawaabta ka shaqeeya marka hore wuxuu xaq u leeyahay inuu xafido buugaagta. Farsamadan waxaa lagu magacaabaa PoW: Caddaynta Shaqada, Cadaynta Shaqada.
Nooca cadeynta culeyska shaqada waa mid dhameystiran, iyo awooda xisaabta badan ee aaladahaaga ay heysato, ayay u badan tahay suurtagalnimada in la ogaado jawaabta.
Si tan loo sameeyo, qashin-qubka hash ayaa loo isticmaalaa.
Qaado algorithm-ka SHA256 tusaale ahaan, xarig kasta oo xarfo ah oo lagu sir gareeyay wuxuu keenaa xargo u gaar ah oo ah nambarro laba-geesood ah oo 256-bit ah. Haddii gundhigga asalka ah si uun loo beddelo, lambarka xashi ee loo yaqaan 'hash encrypted' ayaa gebi ahaanba ka duwanaan doona.
Tusaale ahaan u qaad algorithm-ka SHA256, xarfaan kasta oo xarfo ah oo lagu sir gareeyay waxay soo saartaa xarig u gaar ah oo ah nambarro laba-geesood ah oo 256-bit ah. Haddii gundhigga asalka ah si uun loo beddelo, lambarka xashi ee loo yaqaan 'hash encrypted' ayaa gebi ahaanba ka duwanaan doona
Markii aan furano guri, waxaan arki karnaa tirada macaamil ganacsi ee lagu duubay balooggaas, faahfaahinta macaamil ganacsi, cinwaanka cinwaanka iyo macluumaad kale.
Madax xannibaadu waa summad ka kooban baloog ay ku jiraan macluumaad sida timestamp, Merk geedka haashka, lambar aan kala sooc lahayn iyo xashiishkii hore, iyo samaynta xisaab labaad oo SHA256 ah oo ku taal madaxa baloogga ayaa na siin doonta haashkan.
Si aad ula socotid, waa inaad xirxirtaa macluumaadka kala duwan ee ku jira baloogga, ka dibna aad wax ka beddeshaa lambarkan aan kala sooca lahayn ee ku yaal cinwaanka baloogga si markaa qiimaha soo gelinta loo dhaqi karo si loo helo qiime xashiishad ah halka n n ugu horreeya ay yihiin 0 ka dib xisaabinta .
Xaqiiqdii waxaa jira laba fursadood oo lambar kasta: 1 iyo 0, marka suurtagalnimada guusha isbeddel kasta oo ku dhaca lambarka aan sugnayn waa hal nth oo ah 2. Tusaale ahaan, haddii n yahay 1, taasi waa, illaa iyo inta lambarka koowaad yahay 0, markaa suurtagalnimada guushu waa 1 meelood 2.
Awoodda xisaabinta badan ayaa ka jirta shabakadda, eber badan ayaa jira si loo tiriyo, waana sii adkaaneysaa culeyska shaqada si loo caddeeyo.
Maanta, n shabakadda Bitcoin qiyaastii waa 76, taas oo ah heerka guusha ee 1 ee 76 qaybo ka mid ah 2, ama ku dhowaad 1 ee 755 trillion.
Iyada oo $ 8,000 RTX 2080Ti ah kaararka sawirada, taasi waa qiyaastii 1407 sano oo la tiriyo.
Runtii ma sahlana in xisaabta si sax ah loo saxo, laakiin marka aad sameyso, qof walbaa wuxuu ku xaqiijin karaa isla markiiba inaad saxday. Hadday runti sax tahay, qof kastaa wuxuu ku xidhi doonaa balooggaas buugga wuxuuna bilaabi doonaa inuu xirxirto qaybta xigta.
Sidan oo kale, qof kasta oo ka tirsan shabakadda wuxuu leeyahay isku mid, isla waqtiga dhabta ah oo la cusbooneysiiyay.
Iyo in la sii wado qof walba inuu ku dhiirado inuu sameeyo xisaabinta, noodhka ugu horeeya ee dhammeeya xirmaynta baloogga ayaa lagu abaalmarin doonaa nidaamka, oo hadda ah 12.5 bitcoins, ama ku dhowaad 600,000 RMB. Nidaamkan waxaa sidoo kale loo yaqaan macdanta.
Dhinaca kale, si looga hortago faragelinta buugga, baloog kasta oo cusub oo lagu kordhiyo wuxuu u baahan yahay in lagu qoro qiimaha haashka ee balooggii hore, oo sidoo kale loo yaqaan tilmaame hash ah, oo ku jira madaxa baloogga. Tilmaame-tilmaameedka joogtada ah ee noocan oo kale ah wuxuu ugu dambeyntii tilmaami doonaa aagga aasaasiga ah ee aasaasiga ah, isagoo si adag isugu xiraya dhammaan baloogyada.
Haddii aad wax ka beddesho mid ka mid ah astaamaha baloog kasta, waxaad beddeshay qiimaha xashiishka ee balooggaas, adiga oo ka dhigaya tilmaanta xashiishka baakadka soo socda.
Marka waa inaad wax ka bedeshaa tilmaanta xashiishka ee baloogga xiga, laakiin taasi taa beddelkeeda waxay saameyneysaa qiimaha hash ee balooggaas, sidaas darteed sidoo kale waa inaad dib u xisaabisaa nambarka aan kala sooca lahayn, iyo ka dib markaad xisaabinta dhammeyso, waa inaad markaa wax ka beddelaysaa baloogga xiga ee baarkaas illaa aad wax ka beddelayso dhammaan baloogyada ka dambeeya, kaas oo aad u dhib badan.
Tani waxay ka dhigeysaa wax aan macquul aheyn in buugyaraha uu la socdo waxyaabaha been abuurka ah xitaa haduu doono. Saxiixa elektarooniga ah awgood, buug-hayuhu ma been-abuuri karo kala-wareejin uu qof kale isu beddelo, iyo taariikhda buugga dartiis, ma beddeli karo lacag ka baxsan hawada khafiifka ah.
Laakiin tani waxay keeneysaa su'aal cusub: haddii laba qof ay xisaabinta wada dhammaystiraan isla markaasna ay xirtaan baloog cusub, yaa ay tahay inay dhageystaan?
Jawaabtu waa qofkastoo dhegeysi ugu filan inuu maqlo, oo hadda qof kastaa wuu xirxiran karaa labada baloog kadib. Tusaale ahaan, haddii ninka ugu horreeya ee xisaabinta dhammeeyaa wareegga xiga uu doorto inuu ku xirmo B, ka dib silsiladda B way sii dheereyneysaa qof walbana wuxuu u badan yahay inuu ku xirnaado B sidoo kale.
Lix baloog oo xirxirida ka mid ah, guuleystaha ayaa inta badan la dejiyaa, ganacsigii silsiladda ahaa ee laga tagayna dib ayaa loola noqdaa oo dib loogu celiyaa barkadda ganacsiga si loo buuxiyo
Laakiin maadaama ay tahay cidda ugu dheer dhegeysato cidda ugu dheer, illaa inta aad ka xisaabtami karto dadka kale oo dhan, oo awooddaada tirinta ay ka badan tahay 51%, waxaad ogaan kartaa silsiladda ugu dheer keligaa, ka dibna xakamee buugga .
Marka awoodda weyn ee xisaabinta ee macdanta ee adduunka Bitcoin, ayaa sii kordheysa eber kasta qof walba waa inuu tiriyo, isagoo hubinaya in cidina xakameyn karin buugga.
Laakiin xannibaadaha kale ee kaqeybgalayaashu yar yihiin si fiican uma socdaan, sida 51% weerarkii lagu qaaday lacagta dijitaalka ah ee loo yaqaan Bitcoin Gold bishii Maajo 15, 2018.
Ragga weerarka soo qaaday waxay markii hore ku wareejiyeen $ 10 milyan oo qiimahoodu ahaa bitgold u gaar ah oo ay ku beddeleen, wareejintanna waxaa lagu duubay halka loo yaqaan 'A.' Weeraryahannadu waxay sidoo kale awood u yeesheen inay $ 10 milyan oo qiimahoodu yahay 10 milyan oo doolar ay ku wareejiyaan. Isla mar ahaantaana, weeraryahanku wuxuu si qarsoodi ah u diyaariyey guri B ah oo wareejintu ka dhicin wuxuuna xisaabiyay guri cusub dabaqii labaad ee B. Weeraryahanku wuxuu sidoo kale si qarsoodi ah u diyaariyey B B halkaas oo wareejintu aysan ka dhicin.
Marka wareejinta silsiladda A la xaqiijiyo, weeraryahanku wuu ka laaban karaa xoogaa dahab ah sarrifka. Laakiin maadaama awoodda xisaabinta weeraryahanku ay 51% ka weyn tahay shabakadda oo dhan, silsiladda B ayaa ugu dambayn ka dheereyn doonta silsiladda A, iyo iyadoo loo sii daayo silsilad dheer oo B ah shabakadda oo dhan, taariikhda ayaa dib loo qori doonaa, silsiladda B ayaa beddeli doonta Silsilad sida silsiladda ugu weyn ee runta ah, iyo u wareejinta sarrifka ee Block A ayaa dib looga noqon doonaa, oo ka kasbanaya weeraryahan 10 milyan oo lacag la’aan ah
Maanta, habka ugu fudud ee qofka celceliska ah ee aan lahayn xisaab xisaabeed si uu u helo lacagta dhijitaalka ah waa inuu ku iibsado sarrifka oo uu ugala baxo cinwaankaaga jeebka.
Cinwaankani wuxuu ka yimaadaa furahaaga khaaska ah, oo ah mid sir ah, furaha guudna, oo la xareeyay, wuxuu helayaa cinwaanka.
Shabakad aan la aqoon sida blockchain, kaliya furaha gaarka ah ayaa cadeyn kara inaad adigu tahay, iyo inta wareejinta ay la socoto saxeex elektaroonik ah oo ay soo saartay furahaaga gaarka ah, qof kastaa wuu xaqiijin karaa inuu wareejintu sax yahay. Markaa haddii furaha khaaska ah la waxyeelleeyo, qof kastaa wuu iska dhigi karaa inuu adigu yahay oo wuu wareejin karaa lacagta.
crypto macdanta asic, weelka btc, weelka antminer-ka, weelka antbox, loo adeegsaday qalabka loo yaqaan "crypto", weelka bitmain,